Redmi Series တွေထဲမှာ အထူးခြားဆုံးပြောင်းလဲလာတဲ့ Redmi Note5Pro
15 Feb 2018 . 5:30 PM
Redmi Note5Pro ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ရက်နေ့က အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Redmi Note5Pro တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပဲ Redmi note5နဲ့ ၅၅ လက်မအရွယ် Mi LED Smart TV တို့ကိုပါမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Product တွေထဲကမှ Redmi Note5Pro ကတော့ ထင်ထားတာထက်ပိုတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘာတွေများပါလိမ့်…
Redmi Note တွေရဲ့ ကျောဘက်ကင်မရာတွေဟာ စစထွက်ခဲ့တဲ့ Redmi Note 1 ကနေစလို့ Redmi Note5ရိုးရိုးအထိတောင် မြင်နေကျပုံစံ ကင်မရာကို အပေါ်ပိုင်း အလယ်မှာပဲထားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် Redmi Note5Pro မှာတော့ iPhone X ရဲ့ ပယောဂ လို့ပဲပြောရမလား.. ?
Camera ထားတဲ့ပုံစံက လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။ ဘေးကပ်ဒေါင်လိုက် အနေအထားဖြစ်သွားပြီး Redmi တင်မက Mi Series ထဲမှာပါမရှိဖူးသေးတဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Display ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း 18:9 Ratio ပါဝင်တဲ့ ပထမဦးဆုံး Redmi Note Series တွေဖြစ်လာပါတယ်။
Rear Camera ဟာ Dual ဖြစ်ပြီးPrimary Camera အတွက် 12MP SONY IMX 376 အမျိုးအစား Sensor နဲ့ Depth Effect အတွက် Samsung Sensor ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
20MP Selfie ကင်မရာနဲ့ Portrait ဓါတ်ပုံတွေကိုပါရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်သလို အလင်းအားနည်းတဲ့နေရာတွေမှာအတွက် Selfie Flash-Light ကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါသေးတယ်။
RAM ကို LPDDR4X Chip ကိုအသုံးပြုပေးထားတာကြောင့် ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကျ LPDDR4 Chip တွေထပ် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု 30% ထက်မနည်းသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
စမတ်ဖုန်းလေကမှာ ပထမဦးဆုံး Snapdragon 636 Chipset ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်လာပါတယ်။
Redmi Series တွေထဲမှာ ပထမဦးဆုံး RAM6GB ပါဝင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာပါတယ်။
Battery 4000mAh ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ရရှိနိုင်မယ့်အရောင်တွေကတော့ Black ၊ Gold ၊ Rose Gold နဲ့ Lake Blue ဆိုပြီး ၄မျိးရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့မှာစတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းကတော့
4 GB + 64 GB = Rs 13999 (မြန်မာငွေ3သိန်းဝန်းကျင်)
6 GB + 64 GB = Rs 16999 (မြန်မာငွေ3သိန်းခွဲဝန်းကျင်) ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Redmi Note5ကတော့ Redmi 5Plus နဲ့ Specification အတော်များများတူညီနေပြီး Design လည်းထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး။ ဈေးနှုန်းကတော့
3 GB + 32 GB = Rs 9999 (မြန်မာငွေ2သိန်းစွန်းစွန်းဝန်းကျင်)
4 GB + 64 GB = Rs 11999 (မြန်မာငွေ2သိန်းခွဲဝန်းကျင်) ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့ ခန့်မှန်းမြန်မာငွေတန်ဖိုးများဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ၅သောင်းခန့်ပိုများနိုင်ပါတယ်။
Redmi Series တှထေဲမှာ အထူးခွားဆုံးပွောငျးလဲလာတဲ့ Redmi Note5Pro
Redmi Note5Pro ကို ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီလ ၁၄ရကျနကေ့ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ မိတျဆကျခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။
Redmi Note5Pro တဈမြိုးတညျးမဟုတျပဲ Redmi note5နဲ့ ၅၅ လကျမအရှယျ Mi LED Smart TV တို့ကိုပါမိတျဆကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီ Product တှထေဲကမှ Redmi Note5Pro ကတော့ ထငျထားတာထကျပိုတဲ့ ပွောငျးလဲမှုတှကေိုတှမွေ့ငျခဲ့ရပါတယျ။ ဘာတှမြေားပါလိမျ့…
Redmi Note တှရေဲ့ ကြောဘကျကငျမရာတှဟော စစထှကျခဲ့တဲ့ Redmi Note 1 ကနစေလို့ Redmi Note5ရိုးရိုးအထိတောငျ မွငျနကေပြုံစံ ကငျမရာကို အပျေါပိုငျး အလယျမှာပဲထားခဲ့တာပါ။ ဒါပမေယျ့ Redmi Note5Pro မှာတော့ iPhone X ရဲ့ ပယောဂ လို့ပဲပွောရမလား.. ?
Camera ထားတဲ့ပုံစံက လုံးဝပွောငျးလဲသှားခဲ့ပါပွီ။ ဘေးကပျဒေါငျလိုကျ အနအေထားဖွဈသှားပွီး Redmi တငျမက Mi Series ထဲမှာပါမရှိဖူးသေးတဲ့ ဒီဇိုငျးဖွဈပါတယျ။
Display ပိုငျးမှာဆိုရငျလညျး 18:9 Ratio ပါဝငျတဲ့ ပထမဦးဆုံး Redmi Note Series တှဖွေဈလာပါတယျ။
Rear Camera ဟာ Dual ဖွဈပွီးPrimary Camera အတှကျ 12MP SONY IMX 376 အမြိုးအစား Sensor နဲ့ Depth Effect အတှကျ Samsung Sensor ကိုတပျဆငျပေးထားပါတယျ။
20MP Selfie ကငျမရာနဲ့ Portrait ဓါတျပုံတှကေိုပါရိုကျကူးနိုငျမှာဖွဈသလို အလငျးအားနညျးတဲ့နရောတှမှောအတှကျ Selfie Flash-Light ကိုလညျးထညျ့သှငျးပေးထားပါသေးတယျ။
RAM ကို LPDDR4X Chip ကိုအသုံးပွုပေးထားတာကွောငျ့ ပုံမှနျမွငျတှနေ့ကြေ LPDDR4 Chip တှထေပျ စှမျးအငျသုံးစှဲမှု 30% ထကျမနညျးသကျသာစမှောဖွဈပါတယျ။
စမတျဖုနျးလကေမှာ ပထမဦးဆုံး Snapdragon 636 Chipset ကိုအသုံးပွုထားတဲ့ဖုနျးဖွဈလာပါတယျ။
Redmi Series တှထေဲမှာ ပထမဦးဆုံး RAM6GB ပါဝငျတဲ့ဖုနျးတဈလုံးဖွဈလာပါတယျ။
Battery 4000mAh ပါဝငျမှာဖွဈပွီး ရရှိနိုငျမယျ့အရောငျတှကေတော့ Black ၊ Gold ၊ Rose Gold နဲ့ Lake Blue ဆိုပွီး ၄မြိးရှေးခယျြနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ ဖဖေျောဝါရီ ၂၂ ရကျနမှေ့ာစတငျရောငျးခမြှာဖွဈပွီး ဈေးနှုနျးကတော့
4 GB + 64 GB = Rs 13999 (မွနျမာငှေ3သိနျးဝနျးကငျြ)
6 GB + 64 GB = Rs 16999 (မွနျမာငှေ3သိနျးခှဲဝနျးကငျြ) ကသြငျ့မှာဖွဈပါတယျ။
Redmi Note5ကတော့ Redmi 5Plus နဲ့ Specification အတျောမြားမြားတူညီနပွေီး Design လညျးထူးထူးခွားခွားပွောငျးလဲခွငျးမရှိပါဘူး။ ဈေးနှုနျးကတော့
3 GB + 32 GB = Rs 9999 (မွနျမာငှေ2သိနျးစှနျးစှနျးဝနျးကငျြ)
4 GB + 64 GB = Rs 11999 (မွနျမာငှေ2သိနျးခှဲဝနျးကငျြ) ကသြငျ့မှာဖွဈပါတယျ။
ယခုဖျောပွထားတဲ့ဈေးနှုနျးတှကေတော့ ခနျ့မှနျးမွနျမာငှတေနျဖိုးမြားဖွဈပွီး ပွညျတှငျးဈေးကှကျထဲရောကျလာတဲ့အခါမှာတော့ ၅သောငျးခနျ့ပိုမြားနိုငျပါတယျ။